Kiwi Nchọgharị isi koodu na Github maka onye nrụpụta ọ bụla | Gam akporosis
Kiwi Browser bụ ugbu a na-emeghe isi
Kiwi Browser anọwo na ọ bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mma na anyị nwere maka anyị mobiles. Couplebọchị ole na ole gara aga, na ncheta ya, ọ mara ọkwa na ọ na-aga emeghe oghere yana koodu isi ya dị na Github.
Nke a pụtara na ewezuga inwe ike lee koodu na Github, ndị mmepe nke atọ ga-enwe ike itinye koodu ha ka ha wee rite uru nke omume ọma ya kachasị dị ka otu koodu nke ndọtị. Ọ ga-abụ n'ime izu mgbe anyị ga-ahụ ihe nchọgharị ndị ọzọ na-etinye ha.
Ya mere, site na Github, nakwa na anyị nwere ụdị zuru ezu ugbu a na gam akporo, ị ga-enwe ike ma ọ bụ jiri koodu iji mepụta ndụdụ gị ma ọ bụ jigharịa akụkụ ndị ahụ dị mma maka ịbanye ha na ihe nchọgharị weebụ gị nke ị nwere na Storelọ Ahịa Play. Enwere ike tinye koodu na Browser Kiwi iji melite ya.
Un Ihe nchọgharị nke sitere na Chromium na koodu ya dị na Java na C ++. Dịka onye nrụpụta ya na-adụ ọdụ, sistemụ wuru n'okpuru Chromium nwere ike ịdị mgbagwoju anya ịhazi, mana etinyegoro ndị ahụ etinyegoro na nchekwa.
Site na Kiwi Browser anyị ekwuola n'oge ahụ dịka ihe nchọgharị weebụ ihe nwere ike gosipụta ezigbo atụmatụ na ọtụtụ atụmatụ Nke ihe niile bụ ndọtị na-ele onwe ya anya. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ịgbakwunye atụmatụ dịka nsụgharị desktọọpụ nke Chrome na Firefox.
Nke ahụ bụ kpam kpam na Github inwe ike nara koodu dika ichoro, na-enyocha ya iji mụta mmemme ma ọ bụ na-eme ndụdụ bụ nnukwu ozi abụghị maka anyị, mana maka ndị mmepe ahụ chọrọ imeziwanye ihe nchọgharị ha.
Anyị ga-ahụ na izu ndị na-abịanụ nsonaazụ nke akụkọ a yana na dịka otu onye nrụpụta ahụ siri kwuo, ọ nyeworo ọtụtụ ndị nchọgharị aka iwekọta akụkụ nke koodu ahụ. Kiwi Browser na ịrị elu dị ka ọ bụ n'ụzọ zuru ezu na-emeghe iyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kiwi Browser bụ ugbu a na-emeghe isi
Peppa Pig na ndị enyi ya na-enyere ụmụntakịrị aka ka ha gafere ntakịrị ntakịrị